Iingcebiso ezili-10 zokuYila iwebhusayithi yeArhente yokuThengisa izindlu eqhuba abaThengi nabaThengi ukuba baXakeke | Martech Zone
Ukuthenga isakhiwo, ikhaya, okanye indlu yondondo kubalulekile kutyalo mali… kwaye oko kwenzeka kanye kubomi bonke. Izigqibo zokuthenga izindlu nomhlaba zishukunyiswa luluvo lweemvakalelo eziphikisanayo ngamanye amaxesha- ke kuninzi ekufuneka kuthathelwe ingqalelo xa kuyilwa iwebhusayithi yezindlu ebanceda kuhambo lokuthenga.
Indima yakho, njengearhente okanye umthengisi wezindlu, kukuqonda iimvakalelo ngelixa ubakhokelela kukhetho olusengqiqweni nolunolwazi. Nazi iingcebiso ezintandathu uyilo nokwandisa iwebhusayithi yakho oko kuya kukunceda ekubeni ube yinkokeli yedijithali kwintengiso yezindlu.
Ingcebiso 1: Fakela ukuKhangela okuNgaphakathi kunye noKuhluza amandla
Xa ithemba lakho liyokuthenga izindlu nomhlaba, zihlala zinemilinganiselo ethile engqondweni. Ngokukhawuleza xa undwendwe lufika kwindawo yakho, babonise ukuba unokujolisa kwiimfuno zabo kwaye ubonise iipropathi ezihambelana noko bakufunayo.
Bandakanya ukubekwa ngokucacileyo kwensimu yokukhangela yangaphakathi enezihluzi eziza kukuvumela ukuba ucebe iipropathi zakho zorhwebo. Ukuba imisebenzi yakho ijolise ekuthengweni kwekhaya, umzekelo, kubandakanya ixabiso, uhlobo lwesakhiwo, i-square footage, ubukhulu beqashiso, inani lokulala, inani lokuhlambela, kunye nezinye izinto (indawo yomlilo, iphuli, igaraji, njl.).
Ukuba uluhlu lwakho lubandakanya imimandla emininzi, iintlobo zomhlaba, kunye nezimbo zezakhiwo, unokuba unqwenela ukwandisa amandla okucoca ukuze abathengi bakho banciphise ukukhangela kwabo kwiindawo ezithile nakwezinye iimpawu zepropathi.
Ingcebiso 2: Nikela iphepha kwiphepha ngalinye
Ukukhethwa kwendawo yokuhlala kubalulekile xa kufikwa ekuthengeni ipropathi. Nikezela iphepha kummandla ngamnye, kubumelwane, okanye nakwisithili sesikolo apho unikezela ngentengiso okanye ngokuqeshisa izindlu nomhlaba. Faka ulwazi olusebenzayo nolubalulekileyo ukuze wazi malunga nommandla. Njalo hlala nemephu ebonisa ngokuchanekileyo iipropathi zakho kunye nezinye iindawo ezinomdla:
Iinkonzo ezikufutshane (izikolo, iivenkile, iikliniki, izibhedlele, iicawa)
Iindawo zokuzonwabisa (iipaki, iipuli zokudada, iigalufa)
Iindawo zokhenketho ezikufutshane
Soloko unxibelelana nendlela yokuphila efumaneka ebumelwaneni. Ngaba yindawo ezolileyo nekhuselekileyo, elungele iintsapho ezisencinci, okanye endaweni yendawo ekufutshane ekufutshane neyona ndawo yokutyela, iimovie, kunye neeholo zomsebenzi? Ukongeza ekwaziseni iindwendwe zakho malunga neendawo abangazukuzazi, la maphepha aya kuphucula ukubekwa kwiphepha lesalathiso kwiphepha lakho.
Ingcebiso 3: Nika zonke iinkcukacha ngePropathi nganye
Umthengi okwangoku kwi-Intanethi akafuni ukubiza umthengisi wezindlu okanye umrhwebi ukuze afumane ulwazi olubalulekileyo. Qinisekisa ukuba amaphepha aneenkcukacha zepropathi okanye iiyunithi aqukethe olu lwazi lulandelayo:
Inani lamagumbi, kubandakanya igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela
Imifanekiso eqingqiweyo yesikwere, indawo yokuhlala, kunye neendawo zamagumbi (i-metric kunye ne-impiriyali)
Iinkqubo zombane, zokufudumeza kunye namanzi
Iindawo zokuhlala zangaphandle (iivaranda, iidesika, njl.
Iindawo eziqhelekileyo kunye neenkonzo ezibonelelweyo (kwimeko yeekhondomu)
Ifanitshala okanye izixhobo eziza kubandakanywa
Unyaka wolwakhiwo okanye uphuculo olwenziwe ngokuhamba kwexesha
Amathuba ohlaziyo olutsha (umz. Ukulungiswa komhlaba)
Kwaye, ewe, kubandakanya iifoto ezimangalisayo zayo yonke imiba yepropathi, ngaphandle kwekhaya kuyo yonke i-engile, iifoto zegumbi ngalinye, kunye nemifanekiso yepropathi. Ukuba umfanekiso uxabisa amagama aliwaka, khawucinge nje ukuba nefuthe elikhulu kangakanani na kwiifoto ezintle! Akunyanzelekanga ukuba uqeshe umfoti oqeqeshiweyo… ii-smartphones zanamhlanje zinamandla amangalisayo kule mihla. Ngengile elungileyo kunye nokukhanyisa, unokuba neefoto ezintle ezifaka zonke iinkcukacha zepropathi.
Ingcebiso 4: Bonelela ngeendlela zokuba babelane ngePropathi
Abathengi bezindlu namhlanje banqabile ukuba bathenge bodwa, ke banike iindlela ezininzi zokwabelana nge-imeyile, imidiya yoluntu, okanye umyalezo wombhalo. Unokuba unqwenela ukunikezela ngefomu "Thumela kumhlobo okanye osebenza naye" efaka idilesi ye-imeyile kunye noluhlu lwamaqela anomdla-ulumke nje ukuseta ulindelo lokuba uza kunxibelelana nabo okanye hayi.
Qiniseka ukuba wenza naluphi na unxibelelwano olunokulandeleka ukuze ukwazi ukuqonda ukuba zeziphi iinkonzo zosasazo loluntu eziqhuba ezona zabelo kunye notyelelo kwipropathi yakho.
Ingcebiso yesi-5: Yenza ukuba uqhagamshelane nawe kube lula, kube ngokwakho, kwaye kungabikho xinzelelo
Kuba abathengi bahlala bethandabuza ukufikelela kwiiarhente nakubarhwebi, uya kufuna ukubenza bakhululeke ngakumbi. Ngelixa ubandakanya amagama kunye neenombolo zefowuni zearhente yakho, qiniseka ukuba ubandakanya ifoto kunye nomyalezo owenzelwe wena ukuba imibuzo yabo ayizukucinezeleka.
Qiniseka ukuba ubandakanya ifom kwiphepha lepropathi nganye kunye nolwazi lwepropathi kwindawo efihliweyo. Ngale ndlela, xa ufikelela kubo, ungaphanda ngepropathi kwaye ulungele incoko!
Ingcebiso 6: Thatha iAnalytics kwaye ulandele uLwazi lweeNdwendwe zakho
Nokuba ungumdlali omncinci okanye omkhulu kwicandelo lokuthengisa izindlu nomhlaba, ngaphandle kwamathandabuzo uya kuzuza ngokuqokelela ulwazi malunga neendwendwe zakho. Eli candelo lesicwangciso sakho sentengiso linokuthatha ngokubaluleka okungafaniyo, kuxhomekeke kuhlahlo-lwabiwo mali nakubasebenzi onabo. Izixhobo ezininzi zokukhokela zinokuba luncedo kweli nqanaba.
Qala ukuqokelela ulwazi malunga neendwendwe zakho ngokubakholisa ukuba ukubonelela ngedilesi ye-imeyile kuya kuba luncedo kukhangelo lwabo lokuthengiswa kwezindlu. Nantsi imizekelo embalwa yezicwangciso ezifanelekileyo zokufaka ulwazi malunga nethemba kwishishini lokuthengiswa kwezindlu:
Indlu evulekileyo kunye namathuba okhenketho abucala
Ukhuphiswano okanye unyuselo
Uluhlu lwe-VIP lokubonelela ngezindlu ezizodwa (umz. Amaxabiso ehla)
Iingcebiso ngengingqi yokuthengisa izindlu nomhlaba kunye neengcebiso
Izibhengezo zepropathi entsha
Beka iifom zakho njengamaqhosha, ii-slide-ins, okanye uzibeke ezantsi kwiphepha ngalinye.
Ngayiphi na imeko, hlala ujonge kwinjongo yakho ephambili: ukuqokelela ulwazi kubathengi abanokubakho. Kulumkele ukhuphiswano olungacacanga okanye ukunyuselwa okungahambelani nemveliso oyithengisayo, kungenjalo, unokukhuthaza iindwendwe ezingafanelekanga ukuba zibhalise. Umceli mngeni wokubamba abathengi abanokubakho ngelixa bekhetha iindwendwe ezingenamdla kwiipropathi zakho.
Amaphepha okufika anokulandeleka
Ukuba utyala imali kwintengiso nakwimizamo yokuthengisa, musa ukwenza impazamo yokuyalela zonke izithuthi zakho kwiphepha lasekhaya lakho. Yenza amaphepha athile okufika kumthombo ngamnye-nokuba sisibhengezo sephephandaba lendawo, ibhodi yezaziso, okanye umyalezo we-imeyile. Ngokwenza ubuqu kwi iphepha lokufika kwindawo nganye okanye ijeloAyizukuphela ukwazi ukubanakho ukulandela ukusebenza kweNtengiso yakho, unokwenza imiyalezo yakho ibe yeyakho.
Iphepha ngalinye lokufika kufuneka libe nenjongo enye kuphela. Umsebenzisi ofike kweli phepha kufuneka akwazi ukuqonda ukukunikezela ngemizuzwana embalwa kwaye ayibone inomdla ngokwaneleyo ukuba agcwalise ifom ngolwazi lwakhe.
Nanga amanye amathuba amahle okufika kwamaphepha:
Ukubhengeza ipropathi entsha yokuthengiswa kwezindlu
Usuku lendlu evulekileyo okanye ukubhukisha indawo yabucala
Ukukhuphela isikhokelo sokuthenga ekhaya
Ikhweshine elinokukunceda ekuthengeni indlu
Unikelo lwentengiso kwiiyunithi ezithile zecondo
Ingcebiso 7: Uyilo lwezixhobo zeSelfowuni kuqala
Ngelixa idesktop ibonelela ngetoni yendawo yokuhlala (ipun ejolise) ukubonisa kakuhle ulwazi, ukwakha amava omsebenzisi kwisixhobo esiphathwayo esinomdla kwaye silula kunokuba ngumceli mngeni. Nokuba kuphuhliswa iphepha lokukhangela elinzima okanye ukhenketho lwepropathi yokuthengiswa kwezindlu nomhlaba apho abasebenzisi banokusithupha ngeefoto zepropathi, uyilo lweselfowuni luya kubaluleka kwimpembelelo yoyilo lwewebhusayithi yakho.
Chitha ixesha usebenzisa eyakho indawo kwisixhobo esiphathwayo kwaye ucele ingxelo kubahlobo nakwabo usebenza nabo ukuba kulula kangakanani ukusebenzisa indawo yakho. Uyakufuna ukwahlula uphando lwakho lweselula, ukuhamba kweendwendwe, kunye nefom yedatha efunyenwe ngokutyelela ngefowuni ukuqinisekisa ukuba iyasebenziseka kwaye iyathandeka.
Ukuba uyila iselfowuni kuqala, ungothusi xa ubona ukungxama kwinjin yokukhangela kunye nenani labathengi elonyukayo! Iselfowuni ibalulekile kuyo yonke iwebhusayithi ekwishishini lokuthengisa izindlu nomhlaba!
Ingcebiso 8: Qala iBhlog yokuThengisa izindlu
Ibhlog yithuba elifanelekileyo lokuzibandakanya nabathengi bakho. Ukwabelana ngamabali obuqu, iingcebiso zokuthenga ekhaya, amashishini engingqi owathandayo, ukuvuleka kwendawo yokutyela, isikolo, kunye nolwazi lwerhafu yengingqi… konke kwakha igunya lakho kunye nobudlelwane nababhalisi bakho. Ngelixa ungazange wabahlangabeza, ibhlog ibonelela ngethuba lokuba bakwazi njengenkokeli abanokuyithemba kuluntu oluthengisela kulo.
Ngaphandle kwentengiso, indima yakho njengomcebisi ibalulekile kubudlelwane beshishini obukhulayo kunye nabathengi bakho. Ukuthenga ipropathi kubalulekile, ke igunya lokwakha njengearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba undwendwe lwakho lunokuyithemba kubaluleke kakhulu.
Ukugcina ibhlog yindlela elungileyo yokugcina umxhasi naye. Ukuba ubonelela ngengcebiso kubunini-khaya, ukugcinwa, ukulungiswa kwakhona, kunye nokukhula kwexabiso leasethi yabo-umthengi uya kukugcina engqondweni ukuba bafudusiwe kwaye bafuna ukuthengisa, okanye usapho lwabo luyatshintsha kwaye kufuneka bangene ipropathi efanelekileyo.
Izihloko onokuzisebenzisa kwibhlog yakho azipheli. Nantsi imizekelo embalwa:
Ukuthenga indlu (iikhrayitheriya, ukhetho, ukhetho, imali)
Ukuhla kwexabiso kwintengiso yezindlu
Unyango olusemthethweni (amaxwebhu asemthethweni, iziqinisekiso, iziphene ezifihlakeleyo)
Ukulungiswa kwendawo yokuhlala
Iindawo zokuhlala zabantu abadumileyo
Ingcebiso yamaxesha onyaka (iigadi, ulondolozo, njl.
Icebiso 9: Qalisa iNcwadana yeendaba
Sixoxe ngezinye zeembono zobhaliso apha ngasentla kwiifom zakho zokubamba, kodwa ukubaluleka kweleta yeendaba akunakuthathwa kancinci. Khawufane ucinge ukuba incwadana yakho yeendaba iyindlela yokutyhala iwebhusayithi yakho kumthengi okanye kumthengi onokubakho… ubabonelele ngeengcebiso ezixabisekileyo, izibonelelo zengingqi, kunye nokuqhubeka nokwakha ukuthembeka kunye nokuzithemba kubo. Ukuba ngumthengi, banokufumana ipropathi ebebeyifuna ekugqibeleni. Ukuba ungumthengi, uya kuqhubeka nokugcina ubudlelwane kunye nabo ke xa sele bekulungele ukuthengisa, uya kuba yiarhente ephezulu yengqondo!
Inqaku elisecaleni: Incwadana yeendaba akufuneki ibe ngumthwalo! Iiwebhusayithi zale mihla zinokutya okuhlanganisiweyo okunokufomatha ngokuzenzekelayo, kucwangciswe, kwaye kupapashwe kwiqonga le-imeyile ngaphandle kokuba ufuna ukubamba iqhosha! Thetha kwiqela lakho loyilo lwewebhu ngendlela yokufaka i-RSS kwi-imeyile.
Ingcebiso 10: Khuthaza indawo yakho kunye neeleta zeendaba… naphina!
Faka i-URL yendawo yakho kuwo onke amakhadi eshishini, iflaya, uxwebhu, utyikityo lwe-imeyile, uphawu, nayo nayiphi na into oyenzayo. Abathengi banamhlanje bayakuthanda ukuzenzela inkonzo kwaye basebenzise iwebhu ukwenza uphando nokwenza izigqibo zokuthenga. Xa udibana nabathengi, abathengisi, iingcali zeshishini, kunye nabanini bamashishini bengingqi esidlangalaleni, cela ukuba ungabhalisela ileta yakho yeendaba. Unokumangaliswa linani lokuhanjiswa kunye nezabelo eziza kuveliswa ngumxholo wakho emva kweenyanga ezimbalwa zomfutho.
Ngezi ngcebiso, uxhotyiswe ngokwaneleyo ukuze wandise ifuthe leprojekthi yokuthengiswa kwezindlu kwiwebhu!
tags: Ukuthengiswa kwezindlu nomhlabaukhenketho olushukumayoizindlu ezithengiswayoamaphepha okufika komhlaba nomhlabaukuthengisa izindlu nomhlabaUkuthengiswa kwezindlu nomhlabaIncwadana yeendaba yezindlu nomhlabaindawo yokuthengisa izindlu nomhlabaUyilo lwesiza sokuthengisa izindlu nomhlabaiwebhusayithi yezindlu